Turn On Ideas: September 2010
ခံစားနားလည်မိတဲ့ အချစ်ကို ပြောရရင်...
အချစ်ဆိုတာ ချစ်ခြင်းသပ်သပ်ရယ်ပါ၊ ကျန်တာတွေ ၁ခုမှ မဟုတ်ဘူး။
အချစ်ရဲ့ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို ယုံကြည်စွာ လိုက်ပါစီးမျောရင်း ချစ်နေခြင်း၁ခုသည်သာ အချစ်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု မရှိဘူးလားလို့တော့ ရက်ရက်စက်စက် မမေးကြပါနဲ့။
နှလုံးသားနှစ်ခုရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေ စည်းချက်ညီကြဖို့ ဘယ်ဖော်မြူလာသုံးပြီး တွက်ချက်ရမှာလဲ?
စစ်ပွဲတစ်ရာ နွှဲလိုက်ချင်တယ်၊ အချစ်တစ်ပွဲတော့ မနွှဲချင်ဘူးဆိုတာ ကြားဖူးကြမှာပါ။
မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာအတွက် ပထမဆုံးသော ခြေလှမ်းကို စတင်တော့မှာ။
ပိုင်ဆိုင်ချင်လွန်းတဲ့ စိတ်ကြောင့် ပူပန်ကြောင့်ကြမှုတွေလဲ ခံစားနေရတယ်။
သူငယ်ချင်းက သူသိသမျှ သတင်းစုံ အကုန်ပေးရှာတယ်။
အဲဒိသတင်းတွေကနေ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့် planကိုလဲ ချထားခဲ့ပြီးသား။
ဒါပေမယ့် တွေးလိုက်တိုင်း မင်းအကြောင်းဖြစ်နေတော့ လိုချင်တပ်မက်စိတ်က တိုးလို့သာနေတော့တယ်။
ချစ်နေခြင်း၁ခုသည်သာ အချစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့်သာ အိပ်စက်ခွင့်ကို ရနိုင်ခဲ့တာ။
အိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ မင်းက စိုးမိုးနေတုန်းပဲ။
♫..အချစ်ဆိုသည်မှာ အံ့သြမှုများနဲ့ ဆန်းကြယ်သောအရာ...♫
“သိပ်ကို ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ တန်ခိုးရှင်ဟာ အချစ်ပဲ”
အချစ်က သိမ်မွေ့နူးညံ့သွားအောင် လုပ်နိုင်တယ်။
အချစ်ကပေးတဲ့ အားအင်တွေကြောင့် ရဲရင့်ပြတ်သားလာလိမ့်မယ်။
အချစ်က မဝံ့မရဲစိတ်တွေ သွင်းပေးတတ်ပြန်ရော။
အချစ်ကပဲ စာနာစိတ်တွေ မွေးဖွားပေးလိမ့်မယ်။
ပြောလို့မကုန်နိုင်တဲ့ အချစ်ရဲ့ ဆန်းကြယ်တဲ့ တန်ခိုးတွေပါပဲ။
“ရန်သူမျိုးငါးပါးရဲ့လက်က လွတ်မြောက်နေတာ အချစ်ပဲ”
နှလုံးသားတစ်ခုတည်းက မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ အချစ်သာ အစစ်မှန်ဆုံး ချစ်ခြင်းပါ။
ဒါကြောင့် ဖန်တီးလို့မရသလို ဖျက်ဆီးလို့လဲ မရနိုင်ဘူး။
သိစိတ်(ဦးနှောက်)နဲ့ တားမြစ်ထိန်းချုပ်နေရင်တောင် မသိစိတ်(နှလုံးသား)က အချစ်ကို သတိရနေလိမ့်မယ်။
အဲဒိလောက်ကို လွတ်မြောက်ပြီး၊ သူ့သဘော သူဆောင်နေတာ..အချစ်ပါ။
“ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ မရနိုင်တဲ့ ရောဂါဟာ အချစ်ပဲ”
ဘာကိုမှ ကြိုတင် မပြင်ဆင်နဲ့။
ရှောင်တိမ်းဖို့ ကြိုးစားလဲ အပိုပဲ။
အချစ်ကို မပိုင်ဆိုင်ရလို့ ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားအုံးမှာလား?
ဒီတစ်ခါတော့ ဝီရိယကို ရှေ့တန်းတင်၊ ၂၅မိနစ်ကြီးများတောင် စောရောက်နေခဲ့တာ။
“သင်တန်းက ဒီနေ့ ဒီအချိန် သေချာရဲ့လား?
လာစောင့်ကြည့်နေတာဖြင့် ၁လတောင် ပြည့်တော့မယ့်ဟာ။
sat 9am-11am, အခု sat 1035am.. အိုကေ။
မနေ့ညက သူငယ်ချင်းဖုန်းဆက်မေးပေးတာတော့ လာမယ်တဲ့။
မနက်ကျမှ ကိစ္စပေါ်လာလို့ မလာဖြစ်တာရော?
ခုနက ငါပဲ ဂဂျီဂဂျောင်ကျလို့ ဟိုကောင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ SMSပို့ပေးထားတာ now in classတဲ့ဟာကို။
ဒီကောင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လူမှားပို့ရင်ကော?
ဒီလိုမေးလို့ အဆဲတောင်ခံခဲ့ရပြီးပြီပဲ၊ ဟုတ်မှာပါ။
သင်တန်းက စောစောဆင်းတာရော ဖြစ်နိုင်လား?
ဘာမှ မစဉ်းစားနဲ့၊ အလကား စိတ်ပင်ပန်းတယ်။”
အင်း ချစ်ဒုက္ခတွေ၊ ချစ်ဒုက္ခတွေ...
သင်တန်းရှိရာ ၁၂ထပ်အထိ တက်သွားရင်ကောင်းမလား?
တော်ကြာ ဘာလာလုပ်တာလဲ မေးရင် ဖြေရခက်လိမ့်မယ်။
မူလ အစီအစဉ်က အမှတ်တမဲ့ လမ်းကြုံရင်း တွေ့ကြရမှာလေ...
ဖုန်းနံပါတ်ကို သူငယ်ချင်းဆီက တောင်းလို့ရတာမျိုးလဲ မဖြစ်ချင်တော့...
♫...လာပါတော့ ခါခါမော့ ကိုကိုကျော့ မျှော်တဲ့ ၁၁နာရီ ထိုးတော့ ထိုးတော့
အချစ်ကို အချစ်ကလွဲလို့ ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့ မရနိုင်ဘူး။
တူညီတဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ချစ်ခြင်းဖြင့်သာ အချစ်ကို ပြီးပြည့်စုံနိုင်လိမ့်မယ်။
သိပ်ကို သေချာသွားပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်ခြင်းရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာနောက်ကို
ယုံကြည်စွာလိုက်ခဲ့ပြီးမှတော့ မျက်စိမှိတ် ချစ်လိုက်တော့မယ်...
ဘယ်နေ့တွေ့တွေ့ မင်းလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းလှချည့်။
ဒုက္ခပဲ လူက ကတုန်တယင်ဖြစ်လာသလို။
အရေးထဲ ရင်တွေကလဲ ခုန်လိုက်တာ...
သတိ။ စိတ်ကိုလျှော့ လျှော့...
ရပြီ။ ရှေ့ပြန်လျှောက်၊ ရှေ့ပြန်လျှောက်။
တွေ့တဲ့အခါ မသိသလို အံ့သြဟန်ပြ။
ပြီးရင် စကားကိုလဲ ပုံမှန်ပြော၊ သိပ်ကြောက်မနေနဲ့အုံး။
ရင်တွေကတော့ ဗြောင်းဆန်အောင် တုန်နေတုန်းပဲ...
မနှေးမမြန်နဲ့ ဖြတ်လျှောက်ပြီး၊ ကျော်သွားရမှာ။
ဒီအချိန်မှာ timingက သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်။
အိုကေ တွေ့ပြီ၊ ဆုံပြီ၊ ဆုံပြီ...
ပတ်ဝန်းကျင်ကို နည်းနည်းလောက် ဂရုစိုက်ပါအုံးတော့လား!
ဟာ! ကျော်သွားပြီ။ သွားပါပြီကွာ။
တချက်လေးတောင် လှည့်မကြည့်ဘူး။ :(
ဘဝမှာ ဖြစ်ချင်တာတွေ လိုချင်တာတွေက သိပ်ကိုများပါတယ်။
ဖြစ်ချင် လိုချင်တာတွေ အကုန်ရ အကုန်ဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်မထားခဲ့တာလဲ အမှန်ပါ။
ဒါပေမယ့် အလိုအပ်ဆုံးတွေကိုတော့ ရချင်မိတယ်။
ဒါကြောင့် မင်းလေးအတွက် ရင်ခုန်သံတွေ ဖန်ဆင်းပေးနိုင်အောင်
ရင်ခွင်တံခါးကို လှစ်ဟပြဖို့ လာခဲ့တော့မှာ။
ကံကောင်းထောက်မလို့ ရင်ခုန်သံတွေ စည်းချက်ညီခဲ့ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့။
ထင်ထားတာက သူလေးက မှတ်မိလိမ့်မယ်၊ နှုတ်ဆက်လိမ့်မယ်။
အဲဒိအခါ အလိုက်သင့်ကနေ အပြင်းလိုက်တော့မယ် စိတ်ကူးထားတာ။
"ညီမလေး ကိုယ့်ကို မှတ်မိလား?"
သူလေး စဉ်းစားတယ်၊ စဉ်းစားနေတယ်...
ဒီလောက်ဆို မဆိုးပါဘူး (စိတ်ဖြေလိုက်တယ်)
"ကိုယ်က ကို___ရဲ့သူငယ်ချင်းပါ၊ ကိုယ်တို့ တွေ့ဖူးကြတယ်လေ"
အဲဒိလောက်ထိ စဉ်းစားနေရတာကတော့ တဆိတ်.. လွန်ပြီထင်တယ်။
စိတ်တွေကို ဒီမှာပဲ ထားပါ ကလေးရာ...
မင်းကို ကြည့်ရတာ အတွေးပင်လယ်ထဲမှာ လက်ပစ် ကူးနေသလိုပဲ။
တစ်လတိတိ ကြိုတင်ပြီး သေချာချခဲ့တဲ့ plan၊ ရေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ညွှန်း
အဆင်ပြေသလိုပဲ သရုပ်ဆောင်ပြီး ပြန်လာခဲ့ရတယ်။
ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကျေအောင်ကို အလွတ်ရနေတဲ့ ဇာတ်ညွှန်းထဲကအတိုင်း သရုပ်မဆောင်ခဲ့ရပါဘူးဗျာ...
ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ သွားကြတဲ့အခါ
မတူတဲ့ ရုပ်ပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းတွေ၊
ဒါတွေကလည်း လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကိစ္စ၁ခုပေါ် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်၊ ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းပုံတွေကို ကွဲပြားစေနိုင်ပါတယ်။
အခြေအနေတွေကို အနီးစပ်ဆုံး အမှန်အတိုင်း မြင်တတ်ဖို့က အရေးကြီးဆုံးပဲ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းခလေးရဲ့ အနေအထိုင်၊ အမူအကျင့်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို ကိုယ်က မသိမသာ ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် လုပ်ရမှာ။
ဒီလိုကိစ္စတွေမှာ သူတို့တွေက အရှက်အကြောက်ကြီးကြတယ်လေ။
ဝင်လာပါလို့ မပြောမိစေပဲ၊ ဝင်လာနိုင်မဲ့ လမ်းတွေကို ဖောက်ပေးရုံလောက်သာ...
သူ့အလုပ် ကိုယ့်အလုပ် မခွဲခြားပဲ...
ရေလာရုံသပ်သပ်နဲ့ မလုံလောက်ရင်၊ မြောင်းဖောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေကိုပါ ကူညီပေးဖို့ပါ။
ဒါဟာ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ လက်တွေ့ဖြစ်အောင်လို့ မွန်းမံခြင်းရယ်ပါ ကလေးရယ်။
ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ ကျနော် အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ
ရလာတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ email addressက သက်သေပဲလေ။
ဒါတွေဟာ အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ ရလဒ်ဆိုရင်...
ပထမဆုံးနေ့အတွက် ချထားတဲ့ planထဲ မဝင်လဲ ဘာအရေးလဲနော့။
တကယ်တော့ ကျနော် ကမူးရူးထိုးကွက် နင်းလိုက်တာပါ။
ကမူးရှုးထိုးကနေမှ မူလ သတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ခေါ်ရတာ။
ဘယ်လမ်းကနေသွားသွား ပန်းတိုင် ရောက်ဖို့ပဲလေ။
ကျနော့်ရဲ့ ပထမဆုံးပန်းတိုင်က ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလ်လိပ်စာ။
သူလေးက further studyအတွက် အဆက်အသွယ်တွေ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရှာနေတယ်ဆိုတာ ချစ်သူငယ်ချင်းကောင်းကြီးက ပြောပြခဲ့ဖူးတယ်။
ဒါဟာ ကျနော် သူလေးကို အမြဲဆက်သွယ်လို့ရနေအောင် မကုန်နိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှာပေးနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲလေ။
ကျနော့်ရဲ့ ညီတစ်ဝမ်းကွဲလေးက သူလေးနဲ့ fieldတစ်ခုတည်းက ကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ စီနီယာတစ်ယောက် ဖြစ်နေခဲ့တာကလဲ ကံကောင်းခြင်းပါပဲ။
“ကိုကြီးလဲ ညီမလေးကို တွေ့ဖူးတယ်လို့ ကြည့်နေတာ၊ ဒါပေမယ့် ညီမလေးက မသိသလိုပုံစံဖြစ်နေတော့ စိတ်ကမရဲတရဲနဲ့ပဲ ခေါ်လိုက်တာ။”
“ဆောရီးပါ အစ်ကို၊ အတွေးတွေ လွန်သွားလို့ပါ”
“ရပါတယ်ကွာ၊ ဒါနဲ့ ညီမလေးက ဒီမှာ သင်တန်းလာတက်နေတာလား?”
“ဟုတ်တယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းပါ။ ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်စာ skillကို အားမရလို့ သင်တန်းတက်နေတာ။”
အင်း... ငါ့လမ်းကြောင်းပေါ် မရောက်ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်ရမယ်...
“futher study အတွက်လား?”
“အင်း အဲဒိအတွက်ရယ် မဟုတ်ပေမဲ့၊ futher study ဆက်တက်ဖို့လည်း ရည်ရွယ်ထားတော့ ဒီသင်တန်းတက်ဖြစ်သွားတာ”
“ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကျောင်းတက်တာ ပိုကောင်းတယ်၊ ငယ်တုန်းမို့ ပြောတာ”
“ကိုယ့်ညီလေးက ညီမလေးရဲ့ စီနီယာပဲ အခုဒီမှာ xxxတက်နေတာ 3rd semesterတောင် ရောက်နေပြီ။”
“ကိုကြီးကိုယ်တိုင်ပဲ ညီလေးအတွက် လျှောက်ပေးခဲ့တာ။
ဒါပေမယ့် ကိုကြီးက xxxဆိုတော့ ညီမလေးတို့နဲ့ လိုင်းမတူဘူး။
ဒါကြောင့် ပိုသေချာအောင် အဲဒိမေဂျာနဲ့ပဲ ကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီက ထပ်စုံစမ်းပြီးမှ ညီလေးအတွက် အကောင်းဆုံးမို့ လျှောက်ပေးခဲ့တာ။”
“ကိုကြီးလဲ အဲဒိကျောင်းကပဲ ပြီးတာ၊ ကျောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တခြားသိချင်တာတွေ ကိုကြီး သေချာရှင်းပြပေးနိုင်ပါတယ်။”
ဒါကြောင့် အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ မြစ်ရေကို ၁ခါတည်း အမိအရ ချိုးလိုက်တာ။
ဇွတ်ပဲ လို့တော့ မပြောကြေး။
“မေးချင်တယ်... ဒါပေမယ့် ပြောပြပေးလို့မရရင် အားနာနေရမှာ”
“စာရွက်စာတမ်း ကိစ္စတွေအတွက် ခေါင်းကိုက်နေတာ။ ”
သူတို့လေးတွေအတွက် အဓိက အကြီးမားဆုံးသော ပြဿနာက ဒါပဲ။
ဒါကိုသိလို့ အဓိက ပစ်မှတ်ထားပြီး စပေါ့ရိုက်ထားတာလေး ဒတ်ထိကိုတိုးတာ...
ရှေ့မှာ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်တွေကို မြင်နေရသလိုပဲ...
ဟုတ်တယ်။ ညီလေးတုန်းကလဲ သူ့ရှေ့မှာ လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စီနီယာ မရှိတော့ တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့ ညီလေး အဆင်ပြေသွားတယ်။”
“ညီက ___နဲ့ ပြီးတာလား?”
“ဒါဆို မေဂျာမတူသလို၊ ရခဲ့တဲ့ ဘွဲ့လဲ မတူဘူး၊ ညီမလေးက xxxကပြီးတာ။”
“မတူမှန်း ကိုကြီးသိပါတယ်၊ ဟိုတစ်ခါ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆက်ပေးထားတည်းက မှတ်မိနေတာ။
ရှေ့မှာ ညီမလေးတို့xxxကျောင်းက ဘွဲ့ရတွေ ဘယ်သူမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ပထမဆုံးလမ်းဖောက်ရမယ်။
ဒါပေမယ့် ညီလေးနဲ့ fieldချင်းတူတယ်လေ။ ဒါကြောင့် ညီလေးလုပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း သွားရုံပါပဲ။
အဆင်ပြေမှာပါ၊ ကိုကြီးလဲ ကူညီမယ်လေ။”
“ကိုယ့်ညီ ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကို ပြောပြမယ်လေ၊၊
နားထောင်ကြည့်ပြီးမှ ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ရင် ဆက်လုပ်ကြည့်ကြတာပေါ့...မလုပ်ကြည့်ရင်တော့ ဘာမှမသိနိုင်ဘူး။”
တကယ့်ကို ကမူးရှုးထိုးကွက် နင်းခဲ့တာ။
“အားလည်းနာတယ်၊ အချိန်ရရင်တော့ ပြောပြပေးပါလား?”
အိုး... ကွက်တိ ကွက်တိ။
“သေချာ စုံစုံလင်လင် ပြောပြချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ချိန်းထားတာလေးရှိသေးတော့”
ညီမလေးသိချင်တာတွေ မေးလို့ရအောင်ရယ် ကိုကြီးလဲ စာရွက်စာတမ်းကအစ လိုအပ်တာတွေ ပို့ပေးလို့ရအောင်...
ကိုကြီးဖုန်းနံပါတ်ယူထား။ ညီမလေးဖုန်းနံပါတ်လဲ ကိုကြီးကို ပေး။
နောက်ပြီး.. email addressပါ ပေးထား။
ဒါမှ ညီမလေး သိသင့်တယ်ထင်တဲ့ informationတွေ ပို့ပေးလို့ရမယ်။
မရှင်းလင်းတာရှိရင် ကိုကြီးကို ဖုန်းဆက်မေး။
ချထားတဲ့planထဲ ဝင်လာတုန်းလေး အမိအရဖမ်းဆုပ်လိုက်တာ။
သိပ်ကို သိသာနေလားဟင်! :P
“ဒါ ညီမလေးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေလ် လိပ်စာ”
“သိချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ တော်တော် အားတက်သွားပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။”
“ကိုxxx နဲ့ တွေ့သေးလား?”
“မတွေ့ဖြစ်ပါဘူးကွာ၊ ကိုကြီးလည်း ဒီရက်ပိုင်း တအားအလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့”
“နောက်ကျ နေပြီလား မသိဘူး။”
“ကဲဒါဆို ချိန်းထားတဲ့ဆီ သွားလိုက်အုံးမယ်... ညကျမှ ကိုကြီး ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။
ဟိုကောင်ကြီးကိုလည်း ညီမလေးနဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်မယ်”
ဒီလိုနဲ့ မနက်ဖြန်ပေါင်းများစွာမှာ မင်းလေးနဲ့အဆက်အသွယ်ရနေဖို့ အကြောင်းအရာများစွာနဲ့ တဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်ဖို့...
နေ့တိုင်းနီးပါးလောက် ကျောင်းကိစ္စတွေကို အကြောင်းပြပြီး အီစကလီလုပ်နေမိတယ်။
(အီစကလီ = စကားစမြည်)
တနေ့တနေ့ ကောင်းသောစတင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖို့၊ စိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့် ကျောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်တာတွေ ရှာရဖွေရတာလည်း အမောပဲ။
အချိန်မရွေး ကိစ္စရှိရှိမရှိရှိ ဖုန်းပြောနိုင်မယ့် အဆင့်မရောက်သေးခင်၊ ဖုန်းပြောကြတဲ့အခါ အစပျိုးတဲ့ အကြောင်းအရာက သိပ်ကို အရေးကြီးတယ်။
ကိုယ်နဲ့ဖုန်းပြောဖို့ သူကိုယ်တိုင်က လိုလိုလားလားဖြစ်နေမှ အဆင်ပြေနိုင်မယ်။
တော်ကြာ အကြောင်းအရာတွေက စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းရင် ပျင်းသွားလိမ့်မယ်။
ကျောင်းကိစ္စတွေပြောရင်းကမှ တခြားစိတ်ဝင်စားမယ့် အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပိုပိုပြီးရင်းနှီးလာအောင် လုပ်နေမိတယ်။
အစပျိုးကောင်းကောင်းနဲ့ အကြာကြီးပြောပြီးမှ ပြောချင်တာလေးတွေ ကြားညှပ်ပြောရတာပါ။
အခုအချိန်မှာ သိပ်အများကြီးတော့ ပြောလို့မရနိုင်သေးဘူး။
သူလေးစိတ်ဝင်စားတာတွေက အဆန်းတကြယ်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ရယ်စရာတွေ။
ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာဆိုသလို၊ ငပေါတို့ထုံး နှလုံးမူပြီး ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကို ပေါကွက်လေးတွေ ညှပ်ပြီးပြောခဲ့တယ်။
ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်သာ အဆင်ပြေခဲ့တာ။
တနေ့တနေ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့ ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်တွေကို ပြောပြနိုင်ဖို့...
တအားကို စာဖတ်အား ကောင်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေပေါ့ဗျာ။
တပတ်ကို အနည်းဆုံး၃-၄ရက်လောက် ပြောဖြစ်အောင် အကြောင်းအရာမျိုးစုံ ရှာဖွေတယ်။
အဓိက သူလေးအတွက် အရေးကြီးမယ့် အကြောင်းအရာမျိုးတွေပေါ့။
သူလေးက ကိုယ့်အပေါ် သံယောဇဉ်တွေ ရှိလာတာ တယောက်နဲ့တယောက် ပိုပြီးနီးကပ်လာတာ ခံစားလို့ ရနေခဲ့တယ်။
၂ပတ်၁ခါလောက် သင်တန်းပြီးတဲ့အချိန်လောက်မှန်းပြီး လမ်းကြုံသလိုနဲ့ သွားတွေ့တယ်။
သင်တန်းပြီးချိန်က ထမင်းစားချိန်နဲ့ကပ်နေတာလဲ ကျနော့်အတွက်ကံကောင်းခြင်းပါ။
ထမင်းအတူစားဖြစ်ကြတယ်၊ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ်။
အဲဒိ တွေ့ဆုံမှုတွေကနေ သူလေးအကြောင်း ပိုပိုသိလာရတယ်။
လက်တလော အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျသလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ကလေးရဲ့အကြောင်းကို သိခဲ့ရတယ်။
ညှိုးနွမ်းနေတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေ ကြည်လင်တောက်ပလာအောင် အားအင်တွေပေးချင်မိတယ်။
ဘဝဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ ကလေးရယ်။
အခက်အခဲတွေဆိုတာ ကိုယ်ဘယ်လောက် စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာလည်းဆိုတာကို မှတ်ကျောက်တင်ထားမဲ့ ဘဝရဲ့မှတ်တိုင်တွေပါပဲ။
ကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်စွမ်းကို မှတ်ကျောက်တင်ပေးနေတယ်လို့ သဘောထားပြီး ရဲရဲရင်ဆိုင်လိုက်ပါ။
အခုအချိန်အထိ စိုက်ထူခဲ့တဲ့ မှတ်တိုင်တွေကို ပြန်ကြည့်လိုက်စမ်း။
ဒါတွေဟာ ကလေးကိုယ်တိုင် အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး စိုက်ထူခဲ့တာတွေပါ။
အခုလည်း ကလေးလုပ်နိုင်မှာပါ၊ ကလေးကို ကိုကြီးယုံတယ်။
လက်ရှိ ကလေးရဲ့အခြေအနေတွေက ဘယ်လောက်စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာလည်း ဆိုတာ သက်သေပြနေကြတယ်။
ချစ်ခြင်းတွေနဲ့အတူ ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားမိပါတယ်။
မပျော့ညံ့တဲ့ ကလေးရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို ချီးကျူးပါတယ်၊ ဂုဏ်ပြုပါတယ်ကွာ။
ဘာကိုမှ သေချာမသိခင်တည်းက သိပ်ကို ချစ်မိသွားခဲ့တာ...
တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက် ပိုပိုသိလာရတော့.. မြတ်နိုးတန်းဖိုးထားခြင်းတွေ ပိုလာရတယ်...
ဘယ်လိုမှ ရုန်းထွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်လောက်အောင် နှောင်ဖွဲ့ထားနိုင်တဲ့ မိန်းခလေးရယ်...
ကိုယ့်အပေါ်မှာ ယုံကြည်အားကိုးမိတဲ့စိတ်တွေနဲ့ အားကိုးတကြီးဖြစ်နေတာကို အသုံးချလိုက်သလို ဖြစ်နေလား?
ငါဖြစ်ချင်တာလေးတွေကို ရယူနိုင်ဖို့၊ သူဖြစ်ချင်တာတွေကို လုပ်ပေးနေတာများလား?
ဒါဟာ မရိုးသားတဲ့ ချဉ်းကပ်မှုလား?
ဆိုတဲ့ လားပေါင်းများစွာနဲ့ စိတ်တွေ မွန်းကျပ်လာမိတယ်။
တကယ်ကို ချစ်လွန်းလို့၊ မင်းလေးအနားကို အချစ်တွေနဲ့ပဲ ချဉ်းကပ်လာခဲ့တာပါ။
force မပါတာတော့ အသေအချာ ပြောနိုင်တယ်။
ဒါဆို trick လား?
မဟုတ်ဘူး၊ trick မဟုတ်ပါဘူး။
ချစ်လို့... အနီးဆုံးမှာ နေနိုင်ဖို့၊ အရိုးသားဆုံးနှောင်ဖွဲ့ဖို့ပါ။
ဒီလို အတွေးတွေကြောင့် စိတ်တွေ ပူပန်ပြီး အိပ်ပျက်ရပြန်ပြီ။
ကြုံနေကျ အိပ်ပျက်ညတွေဟာ ကိုယ့်အတွက် မဆန်းတော့တာမို့...
YOUR LOVE IS ALL I THINK ABOUT...
ကိုကြီး ကလေးကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ခံစားမိမှာ... သိလာမှာပါ။
မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရင်၊ မချစ်နိုင်ဘူးထင်ရင် ကိုကြီးရဲ့အချစ်ကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလဲ ယုံကြည်နေတယ်။
ကိုယ်ကလဲ ဒီလိုပဲ ဖြစ်စေချင်တာ။
ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ လိုလိုချင်ချင်ပေးတာကိုပဲ လိုချင်တာ။
ဘယ်လောက်ပဲချစ်နေပါစေ မပေးချင်တာကိုတော့ မလိုချင်ပါဘူး။
ယုံလာအောင် ပြောတာထက်၊ ယုံကြည်နိုင်စရာတွေကိုသာ သက်သေပြမှာ။
ချစ်လာအောင် ပြောတာထက်၊ ချစ်နေပါတယ်ဆိုတာ သိစေမှာ။
လာချင်အောင် ပြောတာထက်၊ လာချင်တယ်ဆိုတဲ့အချိန် အစဉ်သင့် ဖြစ်နေအောင် နှလုံးသားတံခါးတွေ ဖွင့်ပေးထားမှာ။
ခံစားနေရသမျှတွေကို မင်းလေးသိနိုင်ဖို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြောပြမယ်နော်။
နှလုံးသားကလာတဲ့ ရင်ခုန်သံစစ်စစ်နဲ့ နားထောင်ကြည့်ပေါ့။
ပြီးတော့မှ ပေးလိုက်ရမှန်း မသိအောင် မသိသလို သိသလိုနဲ့ တောင်းပါ့မယ်။
နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် များများဖြစ်ဖြစ်၊ ပေးချင်သလောက်သာ ပေးပါ။
တောင့်တနေမိတဲ့ ကြင်နာတတ်တဲ့ အချစ်တစ်ခုဟာ မင်းလေးပေးမှ ရမှာမို့
Posted by TURN-ON-IDEAS at Monday, September 20, 2010 8 comments:
မသိစိတ်ရဲ့ စေစားရာနောက် မျောပါသွားလိုက်တာ...
ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ခဏလောက် အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။
သူငယ်ချင်းက မျက်နှာရိပ်နဲ့ လှမ်းပြီး သတိတွေ ပေးနေတာကိုလဲ သိနေတယ်။
သတိထားနေရင်းက စိတ်တွေ လွတ်လွတ်သွားပြီး မှင်သက်နေမိပြန်တယ်။
သိစိတ်နဲ့ မသိစိတ် အကြိတ်အနယ်ပါပဲ။
သိစိတ်လေးခမျာ မသိစိတ်ရဲ့ အနိုင်ကျင့်တာကို အလူးအလဲ ခံနေရရှာတယ်။
လူလစ်တာနဲ့ သူငယ်ချင်းက “ဟိတ်ကောင်ကြီး.. မင်းမျက်နှာကြီးက ပြုံးဖြီးနေတာပဲ”တဲ့။
“အေး ငါကိုယ်တိုင်လဲ သိနေတယ်... အဟီး”လို့ပဲ ပြောလိုက်နိုင်တယ်။
မင်း. မင်း.. တကယ့်သူငယ်ချင်းကောင်းပါပဲ..... ကွာ
ဒီကောင်ကြီးက သူ့အသိတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြောလို့ အခုဒီကို ရောက်နေရတာ။
ပြောခဲ့ဖူးသေးတာ အခုမှ ပြန်သတိရသွားတယ်။
ချစ်ချာလေးလို့သာ ရူးပေါပေါလေး ပြောလိုက်ချင်တော့တယ်...
ရင်ထဲမှာလည်း ဖိုးသိုးဖတ်သတ်၊ ကျလိကျလိ၊ ဟိဟိဟိ...
ဒီလို ကိစ္စမျိုးမှာ ဆရာကြီး မဟုတ်သလို၊ သူငယ်__စားလဲ မဟုတ်ရပါ။
နို့ပေမဲ့... ဘယ်လိုကြီး ဖြစ်နေမှန်းကို မသိတာ။
အတွင်းထဲမှာ ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေတာတွေကိုတော့ ငါမတားနိုင်ဘူးမောင်။
ငါထိန်းနိုင်တာက အပြင်ကို ဗြစ်ခနဲ ပန်းမထွက်ဖို့ပဲ။
ထိန်းးးးး ထိန်းးး ထိ န်းနေ ပါတ ယ်..
စိတ်ထဲမှာ ကြိတ်ပြောလို့တော့ ရတယ်ဟုတ်?.?.?
မြင်မြင်ခြင်းပေမဲ့ မင်းသိပ်ဆိုးတယ် ကလေးရယ်၊ မင်းသိပ်ဆိုးတယ်။
ဘာလို့ ဒီလောက်တောင်မှ ချစ်ဖို့ကောင်းနေရတာလဲ?
မင်းပြုံးလိုက်တိုင်း အတင်းကာရော ကုပ်ခဲခံနေရတဲ့ ရှုးဖိနပ်ထဲက ငါ့ခြေချောင်းလေးတွေကို သနားရင်ပေါ့...
မရီလိုက်ပါနဲ့ကွာ... ကျေးဇူးပြုပြီး မရီလိုက်ပါနဲ့...
ဒီအပြုံးလေးတွေက ငါ့လက်တွေ တုန်ယင်သွားအောင် လုပ်နိုင်တာ။
တင်းကျပ်နေအောင် ဆုပ်ကိုင်ထားတာကို ခံနေရရှာတဲ့ ငါ့ရှေ့က ဖန်ခွက်ကလေးကသာ သိတာ။
ငါ့ကို မရှိဘူးလို့ပဲ သဘောထားလိုက်ပါ။
ဒီလိုသာ ဆက်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင် မင်းအကြည့်တွေ မခံနိုင်တဲ့ ငါ့မျက်လုံးတွေကို ငါဘယ်တော့မှ ပြန်ဖွင့်ရတော့မှာလဲ?
သေချာတာတော့.. မင်းအကြည့်တွေက ရိုးရိုးလေးရယ်ပါ။
ဒါပေမယ့် ငါ့မှာ အဆန်းတကြယ်တွေ ဖြစ်နေခဲ့ရတယ်။
သေစေလောက်တဲ့ ဒီအကြည့်တွေကြောင့် မှော်ဝင်သလို ငါ့ရင်ခုန်နေခဲ့တယ်...
အကြည့်တစ်ချက်... အသည်းထဲထိအောင် ခါသွားတယ်...♫♫
မင်းရဲ့ အပြုံး၊ မင်းရဲ့ အရီ၊ မင်းရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကို မင်းမသိလိုက်အောင် ခိုးကြည့်နေခွင့်လောက်ပါပဲ။
အခုအချိန်မှာတော့ အဲဒိလောက်သာ စွမ်းနိုင်တဲ့ ငါ့သတ္တိတွေကြောင့်...
မင်းလေး မသိသလို နေပေးပါကွာ။
ငါအခု မင်းလေးဆီက လိုချင်မိတာ အဲသည့်လောက်လေးပါပဲ။
မင်းဆီကလဲ ငါ၁ခုတော့ ခွင့်တောင်းချင်တယ်။
ငါ့ကို မင်းတို့ပြောနေကြတဲ့ စကားဝိုင်းထဲ ဆွဲမခေါ်ပါနဲ့လား။
မင်းက သူငယ်ချင်းကောင်း ပီပီသသနဲ့ ငါဝင်ပါလို့ရအောင် စကားတွေခင်း။
ဘေးက သူငယ်ချင်းရဲ့ တကယ့်အဖြစ်ကိုမှ မင်းမသိတာကွ။
ဖြစ်နိုင်ရင် ငါဝင်ပြောဖို့ မလိုလောက်မဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုသာ ရွေးပြောကြပါကွာ။
ငါဝင်ပြောလို့ ငါ့အသံတွေတုန်နေမှာကို ဘယ်သူမှ မသိစေချင်ဘူး။
အထူးသဖြင့် ကလေးလေး မသိစေချင်သေးဘူး။
အညှို့ခံထားရတဲ့လူလို အဆိပ်ပြင်းတဲ့ ကလေးလေးဆီကိုပဲ ပြန်သွားချင်နေမိတယ်။
တခုခုကို မင်းဆွဲနှုတ်ယူထားလိုက်သလို ရင်ဘတ်ကြီးဟောင်းလောင်းနဲ့။
အဲဒိနေ့က အိမ်ပြန်ချိန်ဟာ သိပ်ကို အထီးကျန်ဆန်လွန်းခဲ့တာပေါ့။
တစ်ယောက်တည်းနေချင်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို အဲဒိတုန်းက မှားနေလားလို့တောင် သံသယဝင်မိသေးတယ်။
တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အခန်းထဲမှာ၊ ဒီနေ့ကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမလဲ?
မင်းလေး ကိုယ့်ကို အပိုင်သိမ်းလိုက်ပြီလားကွာ။
နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလဲ လူက ဂဏာမငြိမ်။
ရင်ထဲမှာ မွန်းကျပ်၊ ငါဘာတွေ လုပ်ရမလဲ?
တွေ့တွေ့ချင်း အဲဒိလောက်ထိ ဖြစ်နေကိုတာသိလို့ မယုံကြည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကလဲ...
အစမကောင်းလို့ အနှောင်းမသေချာ ဖြစ်ရတော့မှာ။
အားကိုးရမယ့် သူငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်ကပါ ယုံကြည်ဖို့လဲ အရေးကြီးသေးတယ်။
အဲဒိလို မင်းကို တမ်းတမိနေတဲ့အခိုက်
တခြားမှာ မင်းပျော်နေမလားလို့ တွေးမိတော့
ကိုကြီးကမ္ဘာတစ်ခုလုံး ခရမ်းရောင်တွေလွှမ်းသွားပြီး အထီးကျန်ဆန်သွားလိုက်တာ...
မင်းလေး အစွမ်းထက်လှတယ် ကလေးလေးရယ်...
♫♫...တခြားသူဦးမှာလဲ ရင်ထဲ ကြောက်နေခဲ့
အလွမ်းနေ့များစွာ ကိုယ့်အတွက် ဖန်တီးလို့ မပေးပါနဲ့
ကိုယ်ချစ်နေခဲ့ ဒါကို သိရက်နဲ့၊ I LOVE U, GIRLရင်ကို ခွဲမသွားနဲ့...♫♫
ဒီသီချင်းထဲကလို ပြောရအောင်ကလဲ ကိုယ်ချစ်နေတာ သူလေးမှ မသိတာ။
မင်းစတဲ့ဇာတ် မင်းပဲအဆုံးသတ်ပေးဆိုပြီး သူငယ်ချင်းကိုပဲ နားပူနားဆာကျရတော့မယ်။
သွားနေကျနေရာတွေမှာ ရပ်၊ ကြည့်၊ ပြန် လောက်နဲ့တင် ပြီးနေခဲ့တာ။
နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဆိုတော့ အချိန်တွေလဲ ကုန်လှပေါ့။
တစ်ယောက်တည်းပဲ သွားလာနေတဲ့ မင်းလေးကို မြင်တော့လဲ၊ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်မိသေးတယ်။
သူငယ်ချင်းဆီကရတဲ့ GTALK ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ပဲ အလွမ်းဖြေနေရုံနဲ့တော့ ဝေဒနာက ပိုဆိုးလာဖို့သာ။
တစ်ခုတည်းသော ဒီဓာတ်ပုံလေးကို printမထုတ်ထားမိလေတော့
monitor screenကို မကြာမကြာ သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေရတယ် ကလေးရယ်...
မချစ်လို့ ဝေးရမှာကို ကိုကြီးနားလည်ပေးနိုင်ပေမဲ့ တခြားသူဦးလို့ ဆိုတာမျိုးတော့ လုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။
♫♫...မင်းနဲ့မှ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေ ထိန်းချုပ်လို့ မရတော့ဘူး...ဒါကို သူလေး သိရဲ့လား
ရူးမိုက်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်တွေ၊ မင်းလေးကြောင့် စိုးရွံ့အားငယ်
အိပ်လို့မရတဲ့ ညပေါင်းများစွာကို ရင်ဆိုင်ကာ ကျော်လွှား...♫♫
မင်းအကြောင်း အိပ်မက်တဲ့ ညတွေဆို
သန်းခေါင်ယံ အချိန်တွေမှာ ငါလန့်နိုးတိုင်း
ဒီလိုညတွေဆို ပြန်အိပ်လို့လဲ မရတော့မယ့်အတူတူ
မင်းလေးနဲ့နီးနိုင်ဖို့ ကြယ်စင်တွေကို လမ်းပြခိုင်းမိတယ်...
ငါ့ရဲ့ညနဲ့ မနက်တွေမှာ မင်းလေး ငါ့အနားရှိစေချင်တယ်...
you make me fall in love, baby...ယုံပါ
မင်းလေးကို ကိုကြီး လိုအပ်တယ်။
ဘဝတစ်ခုလုံးကို မင်းလက်မှာ ပုံအပ်ဖို့၊
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မင်းဆီ ဆက်သဖို့ လာခဲ့တော့မယ်။
ကျောက်တောင်တခုလို လွယ်လွယ်နဲ့ ပြိုလဲမသွားနိုင်တဲ့ အချစ်တွေနဲ့ ငါတကယ်ချစ်မိနေပြီ။
ဒါဟာ ဖန်ဆင်းလို့မရတဲ့အရာ ဖြစ်သလို ဖျက်ဆီးလို့လဲ မရနိုင်ဘူး။
အချစ်တွေကို မင်းဆီ အပ်နှင်းဖို့၊ မင်းလေးပေးမဲ့ အကြင်နာတွေကို မျှော်လင့်ပြီး လာခဲ့တော့မယ်။
ကလေးဆီ ရောက်မဲ့လမ်းကို ဦးတည်လိုက်ပါပြီ။
Posted by TURN-ON-IDEAS at Friday, September 10, 2010 8 comments:
Posted by TURN-ON-IDEAS at Monday, September 06, 20109comments: